Best N'ala gusseted obere akpa Manufacturer na Factory | Guoshengli
Akpa pouss gusset bụ ihe eji eji eme ihe. A na-ahụ ala gussets na ala nke obere akpa. E kewara ha ọzọ na ala ịkọ ala, K-akara, na gussets gbara ala. K-Akara Bottom na Plow Bottom gusset pouches na-gbanwetụrụ site na gburugburu ala gusset pouches iji nweta ikike ikike ọzọ.
Ndidi Gusseted Pouches Nkọwa
Akpa pouss gusset bụ ihe eji eji eme ihe. A na-ahụ ala gussets na ala nke obere akpa. E kewara ha ọzọ na ala ịkọ ala, K-akara, na gussets gbara ala. K-Akara Bottom na Plow Bottom gusset pouches na-gbanwetụrụ site na gburugburu ala gusset pouches iji nweta ikike ikike ọzọ. Akpa akpa gusseted guzoro ọtọ ma na-enwekarị vasatail na usoro nke nha na ụdị, nke enwere ike rụọ ya iji mezuo ngwaahịa gị pụrụ iche chọrọ.
Ihe ndi ozo maka ala gusset pouches
● Bibie zipa: ezi akara na reus
Kedu ka esi tụọ obere ala gusset?
● Brand Effect: Ebe ọ bụ na 1999, anyị bụ ndị China na-eduga mgbanwe nkwakọ emeputa ihe karịrị afọ 20;
O Custom Size & Printing: Mgbanwe rollstocks na pouches nwere ike ahaziri dị ka na chọrọ size na-ebi akwụkwọ
Services Ọrụ Nkwụsịtụ: Gwa anyị ihe ị chọrọ, anyị ga-ewepụtakwa azịza na ọrụ zuru oke maka gị
Short Lead Time: 6 tent nke ígwè obibi akwụkwọ na 49 tent nke n'ịtụgharị igwe, anyị nwere ike rụchaa ma napụta gị ngwaahịa na oge.
● Quality nkwa: ISO, SGS certificated.Strict quality control process make sure all are up to your colors!
Eli Ọrụ a pụrụ ịdabere na ya: Anyị na-anọnyere gị mgbe niile, zaghachi ajụjụ gị ma dozie nsogbu gị, n'agbanyeghị azụmaahịa ma ọ bụ azụ ahịa.
More N'okpuru Gusseted Pouches Pictures
Nke gara aga: Ihe Nkiri Rollstock
Osote: Ewepụghị Bottom Pouches